Bhuku raZvakazarurwa 12:1-17
Mukadzi, mwanakomana, uye dhiragoni (1-6)
Mikaeri anorwa nedhiragoni (7-12)
Dhiragoni inokandwa pasi (9)
Dhiyabhorosi anoziva kuti ane nguva pfupi (12)
Dhiragoni inotambudza mukadzi (13-17)
12 Zvino chiratidzo chikuru chakaoneka kudenga: Kwaiva nemukadzi+ akanga akashonga* zuva, pasi petsoka dzake paine mwedzi, mumusoro make muine korona yakagadzirwa nenyeredzi 12, 2 uye aiva nepamuviri. Aichema, achigomera nemarwadzo ekusununguka. 3 Kudenga kwakabva kwaoneka chimwe chiratidzo. Kwaiva nedhiragoni huru+ yaiva neruvara rwakaita serimi remoto, nemisoro minomwe nenyanga gumi, uye misoro yacho yaiva nekorona nomwe; 4 muswe wayo wakadhonza chikamu chimwe chete chezvikamu zvitatu zvenyeredzi+ dzedenga ukadzikanda panyika.+ Dhiragoni yakaramba yakamira pamberi pemukadzi+ akanga ava kuda kusununguka, ichimirira kuti asununguke yobva yadya mwana wake. 5 Mukadzi wacho akasununguka mwanakomana,+ munhurume, uyo achafudza marudzi ese netsvimbo yesimbi.+ Mwana wake akabva angoendeswa kuna Mwari nekuchigaro chake cheumambo. 6 Mukadzi wacho akatizira kurenje kune nzvimbo yake yaakagadzirirwa naMwari uko kwavaizomupa zvekudya kwemazuva 1 260.+ 7 Zvino hondo yakatanga kudenga: Mikaeri*+ nengirozi dzake vakarwisa dhiragoni, uye dhiragoni nengirozi dzayo vakarwisawo 8 asi havana kukunda,* uye havana kuzovazve nenzvimbo kudenga. 9 Saka dhiragoni huru+ yakakandwa pasi, nyoka yepakutanga,+ inonzi Dhiyabhorosi+ uye Satani,+ uyo ari kutsausa nyika yese;+ akakandwa panyika,+ uye ngirozi dzake dzakakandwa pasi pamwe chete naye. 10 Ndakanzwa inzwi guru kudenga richiti: “Ruponeso+ nesimba neUmambo hwaMwari wedu+ nesimba raKristu wake zvazouya, nekuti anopomera hama dzedu akandwa pasi, iye anodzipomera siku nesikati pamberi paMwari wedu!+ 11 Vakamukunda+ neropa reGwayana+ uye neshoko ravaipupura,+ uye havana kukoshesa mweya yavo*+ kunyange pavainangana nerufu. 12 Saka farai, imi matenga nemi munogara maari! Mune nhamo imi nyika negungwa,+ nekuti Dhiyabhorosi adzika kwamuri, akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi.”+ 13 Dhiragoni payakaona kuti yakandwa panyika,+ yakatambudza mukadzi+ uya akasununguka mwanakomana. 14 Asi mukadzi uyu akapiwa mapapiro maviri egondo guru,+ kuti abhururukire kunzvimbo yake kurenje, uko kwaachapiwa zvekudya kwenguva imwe chete nedzimwe nguva nehafu yenguva,*+ kure nenyoka.+ 15 Nyoka yakabva yabudisa mvura zvine simba mumuromo mayo; yakaibudisa ichiita serwizi ichitevera mukadzi, kuti anyudzwe nerwizi rwacho. 16 Asi nyika yakabatsira mukadzi, uye nyika yakashama muromo wayo ikamedza rwizi rwakanga rwabudiswa nedhiragoni mumuromo mayo. 17 Saka Dhiragoni yakatsamwira mukadzi kwazvo, ikaenda kunorwa nevana* vake vakanga vasara,+ vanochengeta mirayiro yaMwari uye vane basa rekupupura nezvaJesu.+
^ Kana kuti “akapfeka.”
^ Kureva kuti “Ndiani Akaita saMwari?”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “asi yakakundwa.”
^ Kana kuti “upenyu hwavo.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kureva, nguva nhatu nehafu.
^ ChiGir., “nembeu.”